Daawo: Dadkii Ka Danbeyay Qaraxii Soobe Oo Maxkamad Lasoo Taagay iyo Cadeyma Lasoo Bandhigay - Xigasho.net | Xigasho.net
Daawo: Dadkii Ka Danbeyay Qaraxii Soobe Oo Maxkamad Lasoo Taagay iyo Cadeyma Lasoo Bandhigay
Dhageysiga dacwada dadkii ka danbeyay werarkii 14-kii October lagu qaaday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa maanta ka bilaabatay maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kadib waqti badan oo la sugayey.
Adeysanayaasha oo gaarayo ilaa shan ruux ayaa maxkamada kasoo muuqday waxana sidoo kale maxkamada ku sugnaa dadweyne farabadan si ay u dhagestaan dacwada lagu soo oogay edeysanayaasha maxkamada la hor keenay.
Edda edysanayaasha oo ay soo diyaarisay xafiiska xeer ilaalinta Dalka waxa madasha ka aqriyay Gudoomiyaha Maxkamada derajada koobaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuure shuute iyado siweyn loo dhageysanayay.
Akhrinta kadib ayaa qarenada u doodayay edeysanayaasha waxa fursad loo siiyay iney soo bandhigaan wax yaabaha ay ku difaacayaan waxana madasha maxkamada xeer ilaalinta kusoo bandhigtay cadeymo iyo marqaatiyaal danbiga ku cadeyay edeysanayasha.
Ugu danbeyn gudoomiyaha maxkamada derajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xeer ilalainta siiyay waqti si ay usoo dhames tiraan cadeymaha iyo marqaatiyaasha ay haystaan.